UMary Shelley. 168 ngaphandle komdali weFrankenstein. Imibongo emithathu. | Uncwadi lwangoku
Icwecwe lesikhumbuzo eSt Peter's Churchyard, eBournemouth, e-UK.
UMary Shelley Ndandineminyaka engama-53 kuphela xa Ndilishiyile eli hlabathi ngo-1851 ngomhla onje namhlanje. Wathathwa sisisu sobuchopho awayesilwa naso. Kodwa wemka ngonaphakade. Umyili we FrankensteinInoveli yeGothic ngokugqwesa kunye nenye yeentsomi zoncwadi, wayekwangumbhali wemidlalo yaseBritane, umbhali wezincoko kunye nombhali webhayoloji. Y imbongi.
Eli nqaku, elingaziwa ngakumbi kwaye ligutyungelwe lelo lomyeni wakhe, UPercy Bhysse Shelley, ikwafanele ukwamkelwa. Ke kwinkumbulo yomfanekiso wakhe Ndigxininisa ezinye amabinzana ezibini ze imisebenzi yakhe kunye Zine zemibongo yakhe.
Utyelelo lwam lokuqala e-UK yayikuku Bournemouth, isixeko esiselunxwemeni kunye nesokhenketho kakhulu kumazantsi eNgilane, isiNgesi saseBenidorm, ukuze siqondane. Kwaye ndiyakhumbula ngokugqibeleleyo ukuba ndibone olu qweqwe luhlaza ebandleni lase UPeter St., Kumbindi wesixeko. Nabazali bakhe bangcwatyelwe apho, isithandi sobulumko kwezopolitiko UWilliam godwin kunye nefilosofi yobufazi UMary Wollstonecraft. Kwaye nentliziyo yomyeni wakhe, imbongi enkulu yeRoma UPercy Bhysse Shelley.
1.1 UFrankenstein (1818)
1.2 Indoda yokugqibela (1826)
2.1 Yiza kum ngamaphupha
2.2 Uthando wedwa kunye nemfihlakalo
2.3 Xa ndingekho
2.4 Ndimele ndilibale ngamehlo akho amnyama
Lumnka; kuba andazi loyiko kwaye ndinamandla, ke ngoko.
Ndandilungile kwaye ndinothando; Ukubandezeleka kuye kwandithoba. Ndiphe ulonwabo, kwaye ndiza kuphinda ndilunge.
Ndiza kubukela ngobuqhetseba benyoka, kwaye ndiza kukuluma ngobuhlungu bayo. Mntanam! Uzozisola ngomonakalo owenze kum
Indoda yokugqibela (1826)
Ingcuka inxibe impahla yegusha nomhlambi yavumela inkohliso.
Amadoda kufuneka abambelele kwinto embi kakhulu ukuze batyale izandla zabo kumkhonto onetyhefu.
Yintoni enye ngaphandle kolwandle luthando olunomdla olunemithombo yalo ifumaneka kwindalo yethu!
Yiza kum ngamaphupha
Yiza kum ngamaphupha, sithandwa sam;
Andizukucela ulonwabo ekudala lulangazelelwa;
yiza neenkwenkwezi, sithandwa sam,
kwaye ngokumanga kwakho cofa iinkophe zam.
Kwaye ke, njengoko iintsomi ezindala zisitsho,
olo thando lwandwendwela intombi engumGrike,
ade aphazamise into engcwele,
ndavuka ndafika ethembile amathemba akhe.
Kodwa ubuthongo obunoxolo buya kugubungela ukubona kwam
nesibane Ingqondo kuya kuba mnyama,
nini emibonweni yobusuku
Hlaziya izibhambathiso zam kum.
Yiza kum ngamaphupha, sithandwa sam,
Yiza nemiqadi eneenkwenkwezi, sithandwa sam.
kunye nokumanga kwakho cofa iinkophe zam ezivaliweyo.
Uthando wedwa kunye nemfihlakalo
Ukuthanda ukuba wedwa kunye nemfihlakalo;
fumana into engenakuze ibe yeyam;
cinga ngokuzamla okungathandekiyo kwenzonzobila
phakathi kobukho bam nengcwele endiyikhethileyo,
splurge - ukuba likhoboka lam ngokwam -
Siza kuba yintoni isivuno sembewu endiyenzileyo?
Uthando luphendula ngobuqhetseba obuthandayo nobufihlakeleyo;
ngenxa yokuba, esenyameni, uzifihla kamnandi ngolu hlobo,
ukusebenzisa isixhobo soncumo,
kwaye undijonge ngamehlo atshisayo,
Andikwazi ukumelana nomnqweno onamandla kakhulu:
Ndiyawunikela umphefumlo wam kuye.
Xa ingasekho, uhadi uvakala
ngeethoni ezinzulu zomnqweno,
iya kujinga ngaphandle kwengoma, kunye nemitya engenanto,
kwinduli yam yokungcwaba;
ke xa kubetha impepho ebusuku
yeka isakhelo sakho sedwa nesonakeleyo,
Ndiza kujonga umculo kanye
bafumana izikhalazo zabo.
Kodwa ilize ebusuku imimoya iya kuphefumla
Kwiintambo zonke eziwayo
Thulisa, njengefom yokulala phantsi,
Oohadi abaphukileyo baya kuphumla.
Oh inkumbulo! yiba sisithambiso sakho,
uchitheke emva koko walala ebhedini yam,
njengamafutha ahlasela isifuba
yentyatyambo, xa intyatyambo yayo ifile.
Ndimele ndilibale ngamehlo akho amnyama
Ndimele ndiwalibale amehlo akho amnyama, akhangeleka egcwele uthando;
Ilizwi lakho, endizalise ngemvakalelo,
Iifungo zakho ezilahlekileyo kule maze yasendle
Uxinzelelo olonwabisayo lwesandla sakho esithambileyo;
Kwaye, sithandwa kakhulu, ukutshintshiselana kweengcinga,
Oko kwasisondeza ngakumbi komnye nomnye,
Kude kube kwiintliziyo ezimbini umbono omnye owenziwe,
Kwaye wayengasalindelanga okanye eve uloyiko kodwa kwelinye.
Ndimele ndizilibale ezo ntyatyambo:
Ayingawo la ndikunike wona?
Ndimele ndilibale ukubala kweeyure eziqaqambileyo zemini,
Litshonile ilanga, kwaye awuyi kubuya.
Ndimele ndilibale uthando lwakho, uze uvale
Amehlo amanzi ngosuku olungafanelekanga,
Kwaye vumela iingcinga zam ezihlukumezekileyo zifuna ukuphumla
ezifunyanwa zizidumbu engcwabeni.
Owu, ngesiphelo saloo mntu, otshintshe waba ngamagqabi,
Akasenako ukulila nokuncwina;
Okanye ukumkanikazi ogulayo, othuthumelayo ngelixa esiva ubunzima,
Wafumanisa ukuba intliziyo yakhe eshushu yajika yaba lilitye.
Owu, ngamaza amaza aseLethe,
Ngokufana nokubulala uvuyo kunye nenguquko;
Mhlawumbi akukho namnye konke oku onokugcinwa;
Kodwa uthando, ithemba, kunye nawe, zizinto endingenakuzilibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UMary Shelley. Iminyaka eli-168 ngaphandle komdali weFrankenstein. Amabinzana kunye nemibongo.